पोस्टरमा कति झल्कियो प्रदीप र जसिताको प्रेम ? « Ramailo छ
पोस्टरमा कति झल्कियो प्रदीप र जसिताको प्रेम ?
चैत ३० गते रिलिज हुने फिल्म ‘लिलिबिली’ को तीन पोस्टर सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक गरिएका तीन वटै पोस्टरमा नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङ प्रस्तुत छन् । मिलन चाम्स निर्देशित फिल्मलाई चाम्स सहित गोविन्द शाही र सुदीप खड्का मिलेर बनाएका हुन् ।
लिलिबिली टिम यतिबेला प्रचार प्रसार जुटिरहेको छ । विशेष गरी प्रदीप र जसिता प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन् । फिल्ममा प्रदीप र जसितासँगै नायिका प्रियंका कार्की, नायकद्वाय अनुपविक्रम शाही र सविन श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा एलिश कार्की र एसडी योगीको संगीत छ । छायाँकार सुदीप बराल हुन् ।